ဝက်သက်ရောဂါကာကွယ်ဆေး - ဝီကီပီးဒီးယား
ဝက်သက်ရောဂါကာကွယ်ဆေး (အင်္ဂလိပ်: Measles vaccine)သည် ဝက်သက်ရောဂါကို ကာကွယ်ရာတွင် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကို ကလေးအသက်(၉)လတွင် ပထမအကြိမ်ပေးရပြီး ဒုတိယအကြိမ်ကို အသက်(၁၂)လတွင် ပေးရသည်။ ပထမအကြိမ်ပေးပြီးလျှင် (၈၅)ရာခိုင်နှုန်းခန့် ခုခံအားရပြီး ဒုတိယအကြိမ်အပြီးတွင်တော့ (၉၅)ရာခိုင်နှုန်းခန့် ကာကွယ်နိုင်သည်။ ပထမအကြိမ်ပေးပြီးသော်လည်း ခုခံအားမဖြစ်ပေါ်လာသောကလေးများတွင် ဒုတိယအကြိမ်ပေးပြီးလျှင် အားလုံးနီးပါး ခုခံအားဖြစ်ပေါ်လာကြသည်။ အကယ်၍ လူထုတစ်ရပ်အတွင်းရှိ (၉၃)ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အထက် လူများကို ဝက်သက်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးပြီးပါက ထိုလူထုထဲတွင် ဝက်သက်ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားလေ့မရှိပါ။ သို့သော်လည်း အကယ်၍ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသောနှုန်းကျဆင်းသွားပါက ဝက်သက်ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေး၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ခံနိုင်သည်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး အချိန်ကြာရှည်လာသည်နှင့်အမျှ ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု ကျဆင်းခြင်းရှိ၊မရှိကိုတော့ မသိနိုင်သေးပါ။ ဝက်သက်ရောဂါရှိသူနှင့် ထိတွေ့ပြီး ရက်ပေါင်းအနည်းငယ်အတွင်း ဤကာကွယ်ဆေးထိုးလျှင်လည်း ဝက်သက်ရောဂါ မကူးစက်အောင် ကာကွယ်နိုင်သည်။
ဝက်သက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးကို အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ရောဂါပိုး (HIV) ရှိသူများတွင်လည်း ယေဘုယျအားဖြင့် စိတ်ချစွာပေးနိုင်သည်။ ဆေးထိုးသောနေရာတွင် နာကျဉ်ခြင်းနှင့် အနည်းငယ်ကိုယ်ပူခြင်းစသော မပြင်းထန်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသာဖြစ်တတ်ပြီး အချိန်တိုအတွင်းတွင် ပြန်လည်ကောင်းမွန်သွားတတ်သည်။ လူပေါင်းတစ်သိန်းတွင် တစ်ယောက်ခန့်မှာ ပြင်းထန်သော ဆေးမတည့်သည့်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တတ်သည်။ ဂီလန်ဘာရေး ရောဂါလက္ခဏာစု (Guillain–Barré syndrome)၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုချို့ယွင်းသောရောဂါ သို့မဟုတ် အော်တစ်ဇင် (autism) နှင့် အူလမ်းကြောင်းရောင်ရောဂါ (inflammatory bowel disease)တို့ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းများ ပိုများလာလေ့မရှိပါ။
ဝက်သက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးကို သီးသန့်ဆေးအဖြစ်နှင့် အခြားကာကွယ်ဆေးများဖြင့် ရောစပ်ထားသောဆေးအနေဖြင့်ပါ ရရှိနိုင်သည်။ ဂျိုက်သိုးရောဂါကာကွယ်ဆေးနှင့် ဂျာမန်ဝက်သက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးများနှင့် ရောစပ်ထားသောဆေးမှာ အမ်အမ်အာ(MMR) ဟုခေါ်ပြီး (၁၉၇၁)ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံးရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းကာကွယ်ဆေး(၃)မျိုးတွင် ရေကျောက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးကို ထပ်မံရောစပ်၍ အမ်အမ်အာဗွီ(MMRV)ဆေးအနေဖြင့် (၂၀ဝ၅)ခုနှစ်တွင် စတင်ထိုးပေးခဲ့သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးသည် မည်သည့်ရောစပ်နည်းဖြင့်မဆို အကျိုးသက်ရောက်မှုကောင်းစွာရှိသည်။ ဝက်သက်ရောဂါအဖြစ်များသောနေရာများတွင် ဤကာကွယ်ဆေးကို ကလေးအသက်(၉)လတွင် ထိုးပေးရန် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ အကြံပြုထားသည်။ ဝက်သက်ရောဂါဖြစ်ပွားလေ့မရှိသောနေရာများတွင်တော့ ကလေးအသက်(၁၂)လတွင် ထိုးပေးနိုင်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကို အသက်ရှိသေးသော်လည်း အားပျော့သည့် ဝက်သက်ရောဂါပိုးဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကို အခြောက်ခံထားသောအမှုန့်အနေဖြင့်လည်းရရှိနိုင်ပြီး ထိုးခါနီးတွင် သတ်မှတ်ထားသောဆေးရည်ဖြင့် ရောစပ်ရ၍ အရေပြားအောက် သို့မဟုတ် ကြွက်သားထဲသို့ ထိုးနှံရသည်။ ဤကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးလျှင် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိ၊မရှိကို သွေးစစ်ဆေးခြင်းဖြင့် စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်သည်။
(၂၀၁၃)ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာတလွှမ်းရှိ ကလေးပေါင်း(၈၅)ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ဤကာကွယ်ဆေးထိုးပေးပြီးဖြစ်သည်။ (၂၀ဝ၈)ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံပေါင်း(၁၉၂) နိုင်ငံ၌ ဤကာကွယ်ဆေးကို နှစ်ကြိမ်ထိုးပေးကြသည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကို (၁၉၆၃)ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံးစတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထားသည့် အခြေခံကျန်းမာရေးစနစ်အတွက် အဓိကလိုအပ်သောဆေးများထဲတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ (၂၀၁၄)ခုနှစ်တွင် ဤကာကွယ်ဆေးတစ်လုံးကို လက်ကားဈေး (ဝ.၇၀) ဒေါ်လာခန့်ပေးရသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ၁.၅ ၁.၆ "Measles vaccines: WHO position paper."
↑ ၂.၀ ၂.၁ Control, Centers for Disease; Prevention (2014).
↑ "Vaccine, Measles"[လင့်ခ်သေ].
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝက်သက်ရောဂါကာကွယ်ဆေး&oldid=626929" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၈:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။